Nepali Rajneeti | कोरोनाको संक्रमण परिवार भित्र वाटै तीव्र
कोरोनाको संक्रमण परिवार भित्र वाटै तीव्र
बैसाख २३, २०७८ बिहिबार ९७ पटक हेरिएको
दुई साताअघि श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि काठमाडौंका ७५ वर्षीय बाबु र ४० वर्षीय छोरा शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना भए। भर्ना भएको पाँच छ दिनमै बुवा र दुई सातामा छोरोको मृ’त्यु भयो। त्यो परिवारमा सबैजनालाई कोरोना संक्रमण भएको थियो। जटिल समस्या देखिएका बाबु–छोरा उपचारको लागि अस्पताल पुगेका थिए। चिकित्सकले निरन्तर प्रयास गर्दा पनि उनीहरूलाई बचाउन सकेनन्। उपचार गर्दागर्दै दुवैको किन मृ’त्यु भयो भन्ने प्रश्नमा यकिन जबाफ नभएको उपचारमा संलग्न डाक्टर किजन महर्जन बताउँछन्। ‘ढिला उपचारमा पुगेर हो या अन्य कारण, हामी केही भन्न सक्दैनौं, यो रोग नै यस्तै छ, कसैलाई गम्भीर बनाउँछ’, उनले भने।
दुई साताअघि पाटन अस्पतालमा उपचारका क्रममा ससुरा–बुहारीको मृ’त्यु भयो। दुवैमा कोरोना संक्रमण थियो। परिवारका अन्य सदस्यमा पनि संक्रमण थियो तर ससुरा–बुहारीमा जटिल समस्या देखिएको अस्पताल स्रोतले बतायो। यसै साता सुनसरीकी ८४ वर्षीया महिला र उनका ६५ वर्षीय छोराको पनि मृ’त्यु भयो। त्यो परिवारका ८ जनामा संक्रमण भएको थियो।
परिवारका सबै सदस्यमा संक्रमण भएर मृ’त्यु भएका यी प्रतिनिधि घटना हुन्। यसरी परिवार नै संक्रमित भएर ज्या’न गुमा’ने धेरै भएको चिकित्सक बताउँछन्। गत १७ गते संक्रमणबाट मृ’त्यु भएकी दोलाखाकी २९ वर्षीया महिलाका बुवाको वीर अस्पतालमा भेन्टिलेटरको सपोर्टमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको परिवारका अन्य सदस्य पनि संक्रमित थिए। परिवारका संक्रमितमध्येमा दुईजनामा जटिल समस्या देखियो।
दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणबाट एकैपटक परिवारका धेरै सदस्य संक्रमित भएको चिकित्सक बताउँछन्। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कोभिड १९ उपचार संयोजक डा. विमल पाण्डे भन्छन्, ‘उपचारमा आएका सबैजसोमा परिवारभित्रैबाट संक्रमण भएको देखिन्छ।’
भक्तपुरमा पनि धेरै परिवारका सदस्यहरू संक्रमित भएको पाइएको भक्तपुर कोभिड अस्पताल संयोजक डा. सुमित्रा गौतमले बताइन्। नयाँ वर्षसंगै जात्रा, बिहे, भोजजस्ता गतिविधि बढेपछि परिवारै संक्रमित हुने दर बढेको उनको अनुभव छ। पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रोमा अक्सिजन चाहिने बिरामी धेरै देखिएका छन्। अक्सिजन चाहिने अवस्थाका ९५ प्रतिशत अस्पताल भर्ना भएका छन्।
परिवारै संक्रमित भएर उपचारमा आउने धेरै रहे पनि यकिन तथ्यांक भने नभएको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जका श्वासप्रश्वास रोग विशेषज्ञ डा. निरज बम बताउँछन्। चिकित्सकका अनुसार परिवारका सदस्यहरू खाना खाने तथा अन्य बेलामा नजिकको सम्पर्कमा रहँदा छिटो संक्रमण हुने गरेको छ। पाटन अस्पतालका कोभिड १९ उपचार संयोजक डा. पाण्डे भन्छन्, ‘हामीकहाँ पनि भारत र युकेमा जस्तै गरी परिवारै संक्रमित भइसकेका छन्, यो थप डरलाग्दो हुन सक्छ।’ नागरिकन्यूज